Ogaden News Agency (ONA) – Somalidu Mala Dagaalami Karaan Maanta Ciidamada Itoobiya ??
Somalidu Mala Dagaalami Karaan Maanta Ciidamada Itoobiya ??
Su’aashan dad badan oo Somali ah, gaar ahaan siyaasiyiinta ayaa waxay ugu muuqataa inay la mid tahay inagoo isweydiina –Dayaxa ma u duulin karnaa saaruukh- laakiinse anigoo waliba xog-ogaal waramaya waxaan u arkaa inay tahay su’aal la’isweydiin karo oo waliba ay ku jirto badbaadadii Somaliya maanta in su’aashaa la’is weydiiyo.
Dadka aqoonta u leh culuumta meletariga waxay yidhaahdaan; Difaaca ugu wanaagsan waa adigoo weerara cadawgaaga (The best defense is a good offense). Taasoo loola jeedo, intuusan cadawgaaga ku mashquulinin adiga mashquuli.
Hadaan hoos ugu daadago dulucda qoraalka anigoo horeyba u sii sheegay inay jiritaanka Somalida ku jirto in lala dagaalamo oo la’iska celiyo Itobiya, waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay u fahmaan neceybka aan u qabo Itobiya (maadaama aan ahay Somalida Ogadenya) inaan ku salaynayo ra’yigayga oo aan jeclaan lahaa in aan cadawgayga u helo saaxiib Somaliyeed.
Waxay dadka qaba ra’yigaa ku gar heli lahaayeen hadaanay Itoobiya dagaal kula jirin Somalida kale oo colaada Itobiya ay ku ektahay Ogadenya/Somaligalbeed. Marbase haddii ay iskusi ula dagaalamayso jinsiga Somaliga ah oo damaceedii ahaa inay sii gumaysato Somalida Ogadenya ay soo dhaaftay maanta, haddana ayba hororsanayso Xamar iyo Hargaysa waxaan u malaynayaa qofka igula dooda xujadaas inay u gaynayso un fulaynimo ama daba-dhilifnimo ama diin yaraan.
Dagaalka markii muslimiinta la farayay wuxuu Ilaahay ku tilmaamay inuu yahay wax la kohsado (necbaado) hasa ahaatee ay u tahay khayr iyo wanaag, sababtoo ah marka lagugu kalifo dagaal eed ku baxsan weydo nabad jeceylkaagii, hadaad la dagaalami weydo cadawga, waxaad bixinaysaa oo lagaa qaadanayaa wax kastoo qaali ka ahaa agtaada oy diinta ugu horeyso.
Itobiya uguma horeyso maanta inay damacdo ciidda Somaliya. Wuxuu ahaa boqor Minilik ninkii kula dooday dawladaha Yurub markay weydiiyeen inuu u sheego xadka Boqortooyada Abyssinia ee yidhi; .. Dhanka Bariga xadka Imbaraadooriyadda Itobiya waa badweynta Hindiya (Indian Ocean). Markii lagu yidhi dalka aad sheeganayso waxaan ugu tagnay oo kali ah dad Somali ah, jawaabtii uu siiyay waxay noqotay “..waa qabiilo Itobiyaan ah oo xoolaha noo raaca.”
Laga bilaabo waagaa ilaa maanta isma badalin damacii Itoobiya ee ahaa inuu xadkeedu noqdo Indian Ocean-ka. Nin ka mid ah ardaydii dhigan jirtay dugsiyada Qalafe (Missionary school) ayaa wuxuu iiga sheekeeyay waagii uu booqashada ku yimid magaalada Qalaafe boqorkii Itobiya ee Xayle Salaase in ardayda la xafidsiiyay inay ku soo dhaweeyaan hees af amxaari ah oy ku jirto ” Goor ay noqotaba calanka Itobiya Xamar waa laga taagi”.
Waxaa hubaal ah in dhiigyacabka hadda ka taliya Itobiya Meles Zinawi uu dabasocday raadkaa markuu calankiisa ka sudhay madaxtooyadii Somaliya ee Xamar. Hadaanay reer Muqdisho ka dagaalamin oo kumanaanka wiil aan loo hurinna waligeed kama aanay baxdeen Itobiya Muqdisho. Isu sheegi mayno inay dad Somali ah oo siyaasiyiin ah ku soo garqaadeen Itoobiya qabsashadii Xamar. Sababtoo ah gumaysi oo idil waxaa la socda qaar ka mid ah dadka la gumaysanayo.
Qorshaha u dajisan Itobiya ee aanay waligeed ka tanaasulaynin ilaa ay aragto umad iska difaacada waa siday mar kale ugu soo noqon lahayd Xamar iyadoo laga yaabo marka labaadee ay soo galayso in lagu soo dhaweeyo caleemo qoyan oo raali laga yahay, ka dib marka laga waayo Somaliya qof jecel oo u heelan inuu difaaco dalka iyo diinta.
Arimahaasoo idil markaad isu wada gayso waxaa kuu soo baxaysa qaacidadii ahayd (“?? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ????) waxaan ku hureynin lagama leexleexdo.
Shacabka Somaliyeed waxaa lagu midayn karaa oo kali ah in la tuso cadawgooda dhabta ah inuusan ahayn qabiilka la dariska ama deegaanka ay wadaagaan. Colaada sokeeyaha waxaa lagaga bixi karaa un in si dhab ah loo arko cadawga ka faa’idaysanaya burburka Somaliya ee sugaya inuu ugu dambaynta mayd garaaco inta soo hadha. Qorshaha Itobiya waa inuusan damin dabka ka shidan Somaliya oo sida xaabada la’isgu ururiyo marka uu dabka sii damayoba ay kolba koox horleh u soo hubayso.
Itoobiya ma hayso awood ay maanta kula dagaalanto Somali oo u midaysan difaaca dalkooda iyo diintooda. Waxay kula dagaalamayso waa isku dirkooda iyo adeegsiga siyaasigii aan horey u soo tilmaanay ee u noolaa un calooshiisa.
Somaliya lagama dhisi karo 5-8 dawladood oo madax banaan oo midwalba goonideeda loo aqoonsado. Lagamana unki karo khilaafadii islaamka ee burburtay. Maanta waxay taagan tahay in la badbaadiyo jiritaanka qaranimadii Somaliyeed si bal haybadii ay umaddan lahayd loo soo celiyo. Taasina waxay ku iman kartaa oo kali ah in la arko oo la gooyo gacanta shiheeye ee dhex mulaaqaya.
Xigasho – Somalistar iyo Somalimidnimo.